Xaaji Cabdi La Xabaalye, Maxeynu Ku Xusuusanaa • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Umad waliba waxey leedey dad tacab galiyey danta guud, shacabkana tadxiyad (sacrifice) ama naf-u hurid bilaash ah gashaday.
Hadii ay tahey samafal, maal-galin, tacliin, halgan dagaal ama naf-hurid. Bulshadana kolba waayaha soo mara kaga talo-qaadato go’aamada lasoo gudboonaada duruufaha nolosha ee Kala duwan.
Waxa xusid mudan mararka qaar tusmooyinka Qaran in cidkale dafo. Tusaale ahaan manhajka school-da SL taariikhdii halgankii SNM waxa Ku xusan kaliya Muuse Biixi.
@ waa Xarunta laga barto xalinta khilaafaadka ee Jaamacada Hargeysa, xaruntaas oo xataa Madaxweyne Muuse Biixi kasaarey in uu CV giisa in uu ku darsado, in uu ardey u noqdey. Halka Madaxweynuhu mudo kooban uu geel-jireeyey Ku darey.
Mise sidii halyeeyadii horaa dust-pin ka lagu tuuri doonaa oo si fudud lagu ilaawi. Jawaabta waxa laga sugayaa Madaxweynaha S.Land.